Byg Guryaha | Booqo Hultsfred
Khibrad dhaqan badan!
Dareemo baalasha taariikhda! Degmada oo dhan waxaan ku leenahay guryo qurux badan iyo seerayaal jiingado ah. Sidee ku noolaan jirtay waagii hore? Sidee ku nooleyd Halkaan waxaad kaheleysaa khibrado beero iyo deegaan waqtiyadii lagasoo gudbay oo beero kasta ama beer walba ay sheegeyso sheekadeeda
Beerta taariikhda deegaanka ee Hultsfred
Xadiiqad qurux badan oo ku taal harada Hulingen ayaa ah baarkinka taariikhda deegaanka ee Hultsfred. Albaabka midig xiga waa baarkinka Folkets, xarun isboorti iyo kaamam. Ka dib markii la soo dejiyey harada Hulingen sanadkii 1924 waxaa jiray
Baarkinka taariikhda deegaanka ee Millalilla-Gårdveda
Målilla Gårdveda Hembygdspark waa mid ka mid ah jardiinooyinka Iswiidhan ugu weyn uguna firfircoon. Nashaadyadu waxay ka dhacaan halkan sanadka oo dhan, beertana si joogto ah ayaa loo ballaariyaa iyada oo leh meelo cusub oo soo jiidasho leh. Beerta dhexdeeda
Beerta magaalada Virserum
Virserums Hembygdspark waa jardiinooyin guri-guri ah oo ku yaal Virserum oo ka tirsan degmada Hultsfred, oo leh qiyaastii 15 dhisme, laga soo bilaabo qarnigii 1600aad ilaa waqtigan casriga ah. Dhismayaasha ku yaal aagga waxay muujinayaan goobta
Fröreda Storegård laga soo bilaabo qarnigii 1700-aad waa mid ka mid ah taallo dhismeedka Degmada Kalmar. Dhismaha beeraha oo leh xaaladdiisa dhisme oo si cad u muujinaya dabeecadda tuulada beeraha ee Småland laga bilaabo qarnigii 1700aad
Park ku dhig jawi qurxoon. Waxaa jira dukaan snus ah, dukaan suuqa, guri qaxwaha iyo saunada linenka ah iyo qaar kaloo badan. Lönneberga Hembygdsgille waxaa la aasaasay 1941. Waxay badbaadiyeen oo ay daryeeleen dhismayaal duug ah.
Hembygdsgården waxay leedahay jawi dabiici ah oo leh tog durdur leh iyo balli biyo-biyood leh. Xarun hooyo oo qiimo weyn ugu fadhida Venabygden oo leh dhowr dhisme oo qiimo weyn leh
Mörlunda-Tveta hometead - Blåbärskullen
Mörlunda-Tveta Hembygdsförening waxaa la aasaasay 1963, 1965-kiina dhismihii ugu horreeyay waxaa laga dhisay Hembygdsområdet. Waxa loogu yeero "Turkstugan" (4) oo lagu sheego ugu yaraan 300